Seenaa Gooticha ELEMOO QILXUU! – Site Title
Seenaa Gooticha ELEMOO QILXUU!
Posted byabdiaminbakar 1st Sep 2021 Posted inUncategorized
#Seenaa_Gabaabaa_Qabsaawa_Oromoo fi Oromiyaa ELEMOO QILXUU!
Elemoon Qilxuu abbaa isaa Abraahim Umarii fi Haadha isaa Aashaa Aammad irraa Baha Oromiyaa, Godinaa Bareentumaa Konyaa Gaara Mul’ataa, Aanaa Qarsaa, Ganda Galaan kan Raaree Bululoo keessatti arkamutti, toora bara 1936 keessa dhalate.
Elemo akka barnoota Amantii Islaamaa kan ganda itti dhalatetti barsiifamu xumureen, dabalataaf odoo daddeemuu, toora bara 1956-aa magaalaa Diree Dhawaa seene.
Akka achi dhaqeen, jaalalti magaalaa Dirree Dhawaa qoma seentee, darasummaa mana bahee fiin adda baaftee, if keessatti qubsuma murteeffachiifte. Jireenyaaf, dukkaana nama Haaji Umeerii ja’amu, kan meeshaa adda addaa alarraa fidee jimlaa fii takkeen gurgurutti mindaawe.
Elemo, faxinummaa waa barachuu biratti naamusaa fii amanamummaan yaroo gabaabduu keessatti onnee Haajii seene. Akka magaalaa baree, hawaasaa fii amala biyyaa tiin wal fudhateen, eega hujii isaa raawwate booda, galgala-galgala, uffata adda-addaa, kopheelee fii faaya dubartii, Haajirraa fuudhee dukkaannan irra daddeemee jimlatti gurguruun mataa isaa tiif waa jalaa buufachuu jalqabe.
Abbootiin dukkaannanii, kanneen Elemo irra daddeemee meeshaa itti gurguru, akka wal-baraa dhufaniin, akkuma Haajitti, haalaa fii amala isaa jaalatanii, daldala isaanii tiin barbaadutti seenan. Haalli kuni, Elemoof, hammaa fii miyoota gurguru baayyiseef.
Heddominni gurguraa bu’aa jalaa arkatu fijaa dukkaana keeysa oolee horu caal’chisaa dhufe. Hoggaa kana, yaroo dukkaana keessa hojjatu xiqqeeysaa tan daldala ifii isaarratti bobbahuu dheereeysaa deeme.
Gama biraa tiin, Elemo, gaafa magaalaa Dirree Dhawaa qubaterraa kaasee, daldala malees, karaa raadiyoo fii gaazeexoota afaan Arabaa tiin haala siyaasaa adunyaa, keessaa huu, kan sossooha bilisummaa kan yaroo sanitti biyyoota Afrikaa fii Laatiin Ameerikaa keessatti gaggeeffamaa jiru, akkaan hordofuu jalqabe.
Haalli kuni, yaroo hiriyoota waliin wal-arkuu fii barcaaf taa’u, akka nama qamahutti, muka jimaa if dura qaqqabaa, hunda caalaa waanuma qabsoo bilisummaa qofa haasawuu isa jaalchiise.
Hoggaa hiriyoonni oduu dubartoota tiin wal booharsan, haala rifeensaa, tafaa fii guntutaan bareedina dubartii madaalan, Elemo, seenaa Jamiilaa Buuheerd, qabsooytuu biyya Algeeriyaa tan yaroo sanitti oduun isii raadiyoo fii gaazexaalee adunyaa dhunfate odeeysuun, bareedinaa fii dhiira gammachiisuun alattiis, dubartoonni, qabsoo bilisummaa tii fiis qooda guddaa gumaachuu akka dandayan haasawaa ture.
Elemo baadiyyaarraa magaala Dirree Dhawaatti godaanee qabeenyaan if dandayaa dhufullee, amaloota badoo magaalaan guddoon qabduun in hawadamne. Jimaa fii sijaaraan namoota daadda isaa biratti faaya tureeniinillee isa fudhachuu hin dandeenye. Toliinsa haalaa fii amalaa biratti, hojjataa haraaraa fii araadarraa qulqullaawe tahuun, Elemo, hawaasa guddaa bira kutee, Haaji Umeerii malees, naaduraa sooreeyyii magaalaa kanneen meeshaa jimlatti irraa bituu, warra akka Hassan Foorsaa fii Saalim Abuubakar Ba-Mihdaar jala naqe. Hundinuu, daldala isaanii bira taranii, shamarraan isaanii tiin warra kajeelu tahan.
Haaluma kanaan, warri Baa-Mahdar, daldala isaanii kan Adan jiruuf isa qaadhimatanii, Dirree Dhawaa irraa akka gamas sossoohu amansiisan. Akkasiin, walakkaa bara 1963, karaa Adan sossoohe.
Akka Adan dhaqee biyya bareeniis, warra achi geeysaniif hojjachaa, akkuma Dirree Dhawaatti, seedata dhunfaa cinatti ooffachuu jalqabuun, daldaloota biyya sanii tii fii kanneen biyyaa dhufanitti miyoota barbaadamoo gurgurutti seene.
Haala kanaan, daldalli isaa yaroo gabaabduu keessatti toleefii mindooma namaa jalaa if baase. Akka qabeenyi walitti kuufameefiin, achumaa bitee achitti gurguruu mannaa, Taaywaan, iddoo warri inni irraa bitu meeshaa irraa fidanitti sossoohuu jalqabe. Adanirraa Taaywaanitti bobbahuun, yaroo gabaabduu keessatti, Elemo, sooreeysa beekkamaa, akkuma hiikkaa maqaa isaatti, nama if bira dabree rakkataa gargaaru godhe.
Yaroo Elemo Adan seene, biiyti bulchinsa Ingiliz jala turte. Elemo akka bubbulee biyya bareen, dargaggoota biyyaa kanneen dhaaba maqaa Adda Bilisummaa Ummataa, ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴّﺔ ykn
National Liberation Front (NLF) ja’amuun gabroomsaa ifirraa kaasuuf qabsaawaa jiraniin wal fudhatee, yaadaa fii diinaggeen gargaarutti seene. Sadaasa 30, bara 1967, gaafa sossohinsi riphee loltummaa dhaaba armaa olii, gabrummaa Ingiliz buqqisee, biyya Bulchiinsa Ummata Yaman Dhidhimaa (People’s Republic of South Yemen ) gonfachiise, akkuma warra biraatti, Elemo deeggaraa galmaawaa tahuun isaa ifatti beekkame.
Deeggaraa NLF tahuun, Elemo, Falasxiinota bilisummaa biyya isaanii tiif qabsaawan walii niis jaala godhe. Kaayoo qabsoo isaanii galiin gayuuf, walakkaa bara 1964, gaafa dhaaba PLO gurmeeyfatan irraa kaasee, gama waajjira isaanii kan Adaniin, diinaggeen gargaaruun, hariiroo jaallummaa waliin uummate. Isaan malees, Elemo, qabsaawota Adda Bilisummaa Eertiraa (ELF) kanneen yaroo san Adan keeysatti cimoo turan waliiniis qunnamtii walitti dhaabbatte qabaachuun wal’aansoo isaanii hordofaa ture.
Gama biraa tiin, Yaroon Elemo Adan itti dhaqe, yaroo sossoohinsi qabsoo bilisummaa fii yaanni sirna siyaasaa wajji qabeenyaa kan maqaa Soshalizimiin beekkame hawaasa adunyaa itti dhunfatte. Yaroo sanitti, hawaassan adunyaa hedduu keeysatti, qabsaawonni haala armaa olii kanaan gabroomfataa alagaa malees cunqurfamaa fii saaminsa Abbootii Lafaa jalaa bahuuf wal’aansoo cimtuu godhaa turani.
Akka yaadaa tiin sirni wajji qabeenyaa faallaa daldalaa fii sooroma dhunfaa ti. Haalli kuni, silaa, nama akka Elemoo kan qabeenyii amma walitti kuufamaafii jiru, kan makiinaan haarayni, reefu baate, mooraa keessa jaajjitu, kan harkisu hin turre. Garuu, Elemo, nama dantaa mataa isaa caalaa kan ummata bal’aaf irra hadooduu fii yaadu waan taheef, sirna kana qaamaa fii qalbiin fudhate.
Kaayoo sirna kanaa fiixa baasuu fiis, akka Yaman Dhidhimaa bulchiinsa Ingilizii jalaa walaba taateen, dhaaba NLF jalatti, goblaa Markisizim keessatti galmaawee, kitaabban Shuu’ii dubbisuun dhorame. Seenaaleen qabsaawota akka Chee Guveeraa fii Ho Chi Miin niis sammuu fudhatanii yaroo hunda afanii bu’uu didan.
Elemo qabeenyaan sooromuu fii mootummaa biyyaa waliin hariiroo jaallummaa qabaachuun, ilmaan Oromoo kanneen haala adda-addaa tiin biyyaa bahanii achi seenan akkaan gargaare. Elemo, warra baqa dhufaniif dahoo tahe.
Nyaataa fii dhugaatiin gargaaruu bira taree, hamma qubatanitti, mana isaa bira taree, kophatti iddoo galan horii isaa tiin kireeyseef. San malees, warra daldalaaf achi dhufan, kani duubbee isaanii hin-beeyne, miya isaa liqitti kennuuf jalqabe. Haalli isaa kuni, Elemo, rakkoo keessa galche. Walakkaa bara 1968-ii, namicha tokko kan miya irraa fuudhee achumaan biyyatti hafe irraa maallaqa isaa barbaada Finfinnee dhaqe. Namichi, miya liqiin irraa fuudheef horii isaa erguuf mannaa, Elemo hidhaaf qaadhime.
Mootummaa Hayle Sillaasee tan warra dura dhaabbatu akka boombiitti ifirraa eegaa jirtutti, “Elemoo warra biyya alaa keessatti mootummaa dura dhaabbatan waliin nama jiru,” badii jattuun akka qabamee hidhamu godhe. Gama biraa tiin, namichi, durumaanuu tahe ja’amee, mootummaa Xoophiyaa irraa nama itti ergame ja’ama.
Tumiinsarraa kan ka’e, faanti madooytee, Elemo ejjechuu dadhabee, mana fincaanii dhaquuf gargaarsa barbaade. Mana isaa oowwaa fii jiruu isaa mi’ooytuu keessaa, malaan yaamamee kana mudachuun haalaan garaa gube. Horii isaa barbaadaaf, mana hidhaa kan miila isaa tiin dhufee if naqe keeysaa bahuuf, horii biraa dhangalaasutti seene. Mootummaa gunaan aadaa isii taate jalaa maallaqaan if baasuuf, kan arke hundatte harka hiixaachuu jalqabe.
Akkasiin maa-na-uumtetti, hidhaa ji’a jahaa booda, walabummaa horii isaa tiin bitatee, mana hidhaa keessaa bahee, Adanitti deebi’e.
Hidhaan mootummaa Habashaa Elemo haalaan jijjiirte. Eega Adanitti deebi’e, sammuun isaa waan dalagaa dhiiftee, gadadoo balleessaa takka malee biyya haadhaa fii abbaa isaa keessatti mudate, halkanii fii guyyaa, yaaduu irraa hara fudhachuu didde. Saba irraa dhalate, kan biyya isaa keessatti mirga tokkollee qabaachaa hinjirreef, humaa godhaa jiraachuu dhaba isaa tiif gaddi weerare.
Haalli kuni, isa dhunfatee, fedhii dalagachuu keessatti laamsheesee, karaa fii haala qabsoo bilisummaa ummata Oromoo irraa qooda itti fudhatu qofa akka yaadu goodhe. Yaada isaa kana hujiirra oolchuuf, odoo iyyaafataa fii qorannoo godhuu, Kaa’imman Oromoo kanneen qabsoo bilisummaa jalqabuuf fedhii qaban biyyaa baqatanii Soomaaliyaa keessa jiraachuu dhagaye. Dhageeytii faana-dhawee akka mirkaneeyfateen, qunnamuuf karaa Maqdishoo barare. Achitti, Jaarraa Abbaa Gadaa tii fii sab-boonota biroo kanneen wal’aansoo qabsoo bilisummaatiif qophii tahaniin walitti dhufe.
Elemo, Jaarraa Abbaa Gadaa tii fii sab-boonota biroo kanneen fedhii qabsoo bilisummaa akka isaa qaban arkuun haalaan gammachiise. Nama qabsoo akka isaanii tiif murate, kan mootummaa Adan waliin jaallummaa qabu, kan qabsaawota Falaxiinii fii kanneen biroo waliiniis hariiroo qabuun walitti dhufuun, Jaarraa Abbaa Gadaa faa keessattiis gammachuu daangaa hin qabne uumte.
Hawwii qabsoo bilisummaa tan mootummaan Soomaalee keessatti ukkaamsitetti hafuurri deebi’eef. Marii godhaniin, akkaataa yaada isaanii if dura itti tarkaanfachiisanirratti mala tarrifatanii, Elemo hujii adda fudhatan fiixa baasuuf Adanitti deebi’e.
Elemoo fii sab-boononni Soomaalee irraa Adan dhufan, kanneen Yamanii fii biyyoota adda-addaa irraa itti dabalaman waliin, tooftaa lolaa barachuuf, moora leenjii Falasxiinotaa tan Adanitti arkamtu seenan. Jaarraa Abbaa Gadaa, tooftaa lolaa biratti tan riphee loltummaa fii hoogganummaa akka baratuuf gama mooraa leenjii waraanaa tan Falsxiinoonni Suuriyaa keessaa qaban dhaqe. Akka barnoota barbaachisu fixateen, Adooleeysa 23, bara 1970, Adanitti deebi’e.
Miyni waraanaa kan arkamee akka naannoo san dhufeen, warra leenjii barnoota lolaa fixatan keessaa qabsaawonni soddomii jaha, karaa Soomaaliyaa tiin Oromiyaa seenanii qabsoo hidhanoo bilisummaa ummata Oromiyaa jalqabuuf, Onkololeessa 17, bara 1970, hoogganummaa Jaarraa Abbaa Gadaa tiin, dooniin, Bahara Diimmaarra, Adanirraa karaa Soomaaliyaa sossoohan.
Yaroo sanitti, Elemo, qabeenya gayaa malees, haadha warraa, Aammuun Umar, tan bareedina daawwatamee hin quufamneen faayamtee fii ilma isaa kan maqaa Kallachaa, Abdukariim, moggaaseef fii intala isaa Hanaan, tan reefu dhalatte, qabaachuu ture. Horii fii matii biratti, hoogganoota biyya Adan waliin jaallummaa qabuun, biyya san keessatti, jiruu nagayaa, sadoo fii qananiin jiraachuu isaaf salpha ture. Saniin alattiis, achuma jiraatee, maqaa qabsoo Oromoo tiin yaroo-yaroon biyyoota alagaa keessa daddeemuun jiruu isaa itti fufuu ni dandaya ture. Garuu, fedhiin bilisummaa tan onnee keeysaa belbeltu, sadoo fii qananii gatee, maatii isaa Rabbitti dhiisee, qabsoo hidhannoo jalqabuuf, karaa daggala Oromiyaa akka sossoohu goote.
Akkasiin, qabsaawota waliin biyya seenuu murteeyfatan waliin, miya waraanaa hamma dooniin deemuun dandeeysu fe’anii, Arfaasa 06, bara 1973, Adanirraa ka’anii, qilleensaa fii dambalii hamilee cabsuu barbaaddu keessa hulluuqanii malkaa Asabitti tarkaanfatan. Achirraa, lafa ummata Affar keessa loohaanii hawaasa isaaniitti fullahan.
San booda, Eleemoo fii Qabsaawonni, miya waraanaa kan fidatan iddo adda-addaatti dhooyfatanii, haalaa fii naannoo qubsumaa qorachuu irratti bobbahan. Qormaata yaroo xiqqoo boodaan, Gaara Gubbaa Qorichaa hundee godhatanii, Daloo ifii olitti laalaa, gadiin Galamso daawwachaa, Shaggariin, “kiiloo meetira dhibba lama qofa sirraa jirraa, nuu obsi,” ja’chuun, hidhannoo isaanii tan waraanni mootummaa hin qabneen hawaasa keessa daddeemaa dammaqiinsaa fii hamilee ummataa kakaasutti seenan. Gandi keessa bobbahan, kan itti aanuuf haala isaanii odoo hasaasuu, oduun isaanii yaroo takkatti lammii walgeeyse.
Dhaadannoon isaanii tan, “ummanni keenya biyya isaanii keessatti, mirga abbaa biyyummaa mulqamanii, gabrummaan jiraachuun raawwachu qaba!” tan jattu, hawaasa Oromoo bira tartee, tan diinee seente. Nafxanyoonni naannoo Gubbaa Qorichaa dhunfatanii ummata keenya-rratti roorrisaa jiran yaroo tana dhagayan gurra isaanii amanuu dadhaban.
Oduun haala Mulaatuu mudatee, Galamso qaxxaamurtee, Finfinnee baatee gurra mootummaa Habashaa seente.
Hayle Sillaasee fii dooginyoonni isaa shororkaa biraa keessa jiraatanillee, tana gurraan dhagayuun taan daran yaachisee, hatattamaan humna daddaffii tan Faxnoo Daraashiitti beekamtu naannoo sanitti ergan. Faxnoon, nafxanyoota naannoo sanii waliin tahuun, manneen irra daddeemanii manguddoota, sheekkotii, daldaloota, barattootaa fii kaa’imman Galamsoo fii naannoo sanii kanaa-sanii malee, hidhatti guuran.
Dargaggoonni, nafxanyoota akka saree maraattee Oromoota hidhuuf ganda keessa o’orihan jalaa jalaa miliquu dandayan, qabsaawota biratti jalaa baqatan. Guyyaa sanirraa kaasee, irreen qabsaawotaa cimaa dhufte. Ummanni keessa jiran gadaameysaa tahaniifii caasaan isaanii guddachaa, marsaan bal’achaa deemte. Gama kaaniin, wal’aansoon naannoo sanitti finiintee, lolli walitti dhaabbate. Nafxanyoonni baadiyyoota Gubbaa Qorichaa keessa jiran darsa guurratanii magaalatti godaanuu jalqaban.
Baadiyyaan nagaya arkatte. Abbootiin biyyaa xixa nafxanyootaa irraa hara baafatan.
Odoo haalli akkanatti deemaa jiru, Waxabajii 28, bara 1974, Dargiin jaaramtee aangoo biyyaa Hayle Sillaaseerraa fudhatte. Akka barcuma tottolfatteen, rakkoolee biyyaa kanneen muddamsiisaa jiran caalaa, kan naannoo Gubbaa Qorichaatti nafxanyoota mudachaa jiruuf durummaa kennitee, miseensoota isii keeysaa, Koloneel Zallaqaa Bayyanaa naannoo sanitti ergite. Zallaqaan, nafxanyoota baaraga duuti Mulaatuu itti fidde keessaa baasuuf, irbuu seeneef.
Ummata Galamsoo dirree magaalaa-tti walitti qabate. Loltootaan marsee, walakkaa dhaabbatee, “isin ummanni Galamsoo fii naannoo isii, shiftoota isin keessa daddeeman fiduu ykn dhabamuu keessaa tokko filadhaa,” jachuun doorsise. San booda, murna waraanaa kan Shaalaqaa Kaasaahun Alamaayyoo tiin hoogganamu, Galamsoo fii Gubbaa Qorichaa jidduu, Gooroo Khinteerii ja’amturra qubachiise.
Guyyaa Faxnoon lubbuu nama Oromoo galaafatan, qabsaawonni Amaarota baadiyyaa keessa jiranitti dhaqanii hulaa dhadhawanii, qabsoon manaa bahaniif, tan hiyyeessa Amaaraa, kanneen hawaasa Oromoo keessa nagayaan jiraatan miidhuu akka in tahin mirkaneessaniif. Gochi Faxnoo isaanii fii Oromoota jiddutti garaa-garummaa uumuuf waan karoorfame tahuu beeysisuun, dhaamsaa waliin jaratti ergan. Dhaamsa Faxnoof barreessan irrattiis, akeeka deemaniif ifa baasaniif. Wal’aansoon itti jiran tan gabrummaa Habashaa ifirraa buqqisuu fii, tan abbaa biyyummaa ummata Oromoo mirkaneeysuu tahuu adeessaniif. Sanumarratti dabalanii, ummata nagaayaan jiraatan irratti ajjeechaa hojjatamu akka balaaleeffatan hubachiisan.
Akkasumaa waliin, kana booda, yo nama Oromoo tokko ajjeesan, dhiiga gama kaanirraa dhangalauuf warri itti gaafatamu isaan taachaa beeysisan.
Lolli ganama jalqabe, dafee raawwachuu dhiisee, lakkumaan, aduu waliin oowwutti seene. Ibiddi gooroo gubbaa itti roobu, baayyina waraana diinaa xiqqeeysaa dhufe.
Haalli akka mooraa itti baheef tahuu dhabnaan, ajajaan waraana diinaa, kanneen mooratti hafan dhufanii akka gargaaraniif dirmachuu lallabate. Tanaa-tana jiddu mudaamuddii ol, bakka miilaa fii garaan Elemoo walitti jaajju, xiyyitiin diinaa takka dhuftee seente. Elemo dhawamuu isaa kan hubate yaroo humniti diinaa akkaa-gara dhabdee, dhukaasni gama isaanii tiin itti ol roobu qabbanaawe.
Waraanni mooratti hafan akka iyyannaa dhagayniin, dirmachuuf orihaa dhufanii waaheloota du’aa fii madaawuu irraa hafanitti hafuura lubbuu deebisanii, waliin, qabsaawotatti dhukaasuu jalqaban.
Yoona, Elemo, qabsaawonni tokko-tokkoon suuta lola keessaa mimmiliqaa akka lubbuu boruuf baasan ajaje. Haala miliquu isaaniif aanjeeysuuf, ansoolaa deemmatuun irraa fiinxa dhoosee bakka dhiiyni irraa yaa’aa jirutti maree, dhagaa guddaa dahoo godhatee, waraana diinaatti dhukaasa banuuf jilbiiffate. Qabasaawonni haala isaa kana arkan amrii isaa dura dhaabbachuun, biraa deemuu didan. Elemo garuu, isa caalaa kan arraaf lubbuu baafachuu qabu isaan taachaa itti hime. San malees, “manaa kaniin baheef qabsoo bilisummaa ummata kiyyaa fi. Haala kanaan du’uu caalaa wanni na gammachiisaa hin jiru. Qaanqee qabatte tana akka hin dhaamne godhuun dirqama isinirra jiru.
Kanaaf, na dhiisaa deemaa. Ani hamma lubbuun na keeysa jirtu diina isinirraa hiin ittisa.” Jechuun bakka riphiserraa diinatti dhukaasuu jalqabe.
Waraanni Kaasaahuun, gama isaanii tiin, iddoo dhukaasni irraa itti as dhawamutti, xiyyitii malees madaafaa haraa, karaa maraan dooyatti ol yaa’an. Elemo bakka jilbiiffaterraa waaraana diinaa kanneen itti ol yaa’an hamma dandayu odoo lafaan dhawuu, sagaleen kilaash isaa callifte. Waraanni diinaa bakka irraa itti dhukaafamaa ture hoggaa gayan, ibiddi itti roobaa ture qaama adda bittinneessee, haabee nama itti dhukaasaa turee dhaban. Yaroo dilli kuni tahu, dachiin Xirroo maaltu na mudate jette.
Samiin naannoo sanii waan jalatti deemaa jiru laaluu jibbite duumeeysa hagooggatte. Aduun kana hunda daawwachaa ooltee, Asrii, lubbuu Elemoo Qilxuu, jeeyna qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessatti gita hin qabne, umrii soddomii saddeetitti fudhatte!
Seenaa Abdi Mahammed Qophee
Qormaata Bultii, Fuudha fi Heeruma, Sittin Heeruma Sin Fuudha Jechuun Laftuudha Afaanin!